DOWNLOAD DRIVERS MAKA CANON CANON MF3010 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download Canon MF3010
O doro anya na ị chọpụtara na mgbe ị zụrụ ihe nbipụta ọhụrụ, ọ gaghị eme ngwa iji mezuo ọrụ ya, ịnweta iwu site na kọmputa nkeonwe. A na-edozi nsogbu ahụ site n'ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala ibe gị. N'ụzọ dị mwute, ndị na-emepụta anaghị enye diski na software ndị bụ isi mgbe niile.
Chọọ na ntinye nke ndị ọkwọ ụgbọala Canon MF3010
Na ọnọdụ a, ịnwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala ahụ maka ngwaọrụ ndị dị mkpa maka n'efu, na-ama nanị ihe nlereanya ha. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya ọtụtụ ụzọ ịchọ software Canon MF3010 n'okpuru Windows 7. Otu ntụziaka ahụ ga-adị mkpa maka ndị nwe nsụgharị ndị ọzọ nke sistemụ arụmọrụ a na ntakịrị iche na interface. Naanị ihe dị mkpa bụ njikọ njikọ Ịntanetị.
Download i-SENSYS ezinụlọ nke ndị na-ebi akwụkwọ ngwa ngwa na-enweghị nsogbu ọ bụla site na ukara Canon website.
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ emeputa site na iji njikọ dị n'elu. Ọzọ, gaa na taabụ "Nkwado"wee họrọ ngalaba "Ndị ọkwọ ụgbọala".
Window ọhụrụ ahụ nwere ụlọ nyocha ebe ị kwesịrị itinye aha onye nbipute ahụ. Anyị na-akwado ederede site na ịpị Tinye na keyboard.
Nsonaazụ ọchụchọ ga-agụnye ngwanrọ niile dị mkpa, ngwa ngwa, yana akwụkwọ maka ndị na-ebi akwụkwọ Canon. Leba anya na mmewere ebe ịchọrọ ịhọrọ usoro sistemụ. Dịka, saịtị ahụ n'onwe ya na-ekpebi ụdị Windows, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike ịhọrọ usoro ọrụ arụmọrụ ọzọ.
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ọkwọ ụgbọala ugbu a. Ihe nlereanya anyị na-egosi ndị ọkwọ ụgbọala dị n'otu na nke mbụ. Maka ịrụ ọrụ nkịtị nke i-SENSYS MF3010 na-ebi akwụkwọ, dabara mmemme abụọ ahụ. Anyị pịa "Download".
Nabata usoro nke nkwekọrịta ahụ, mgbe nke ahụ gasịrị ibudata amalite.
Na njedebe nke nbudata, ị nwere ike ịga n'ihu nwụnye. Iji mee nke a, soro usoro ndị a.
Mepee faịlụ ebudatara. Na mpio mbụ, pịa "Na-esote".
Anyị nabatara usoro nke nkwekọrịta ọrụ ahụ.
Echefukwala jikọọ ngwa ngwa ahụ site na USB gaa na PC gị tupu ịkwado ọkwọ ụgbọala ahụ kpọmkwem.
Na njedebe nke usoro a ị ga-ahụ ozi na onyinye iji bipụta ebe nyocha.
Ị nwere ike iji ngwọta ọkwọ ụgbọala zuru ụwa ọnụ. Ebumnuche nke usoro a bụ iji melite ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ngwaọrụ ọ bụla na PC gị. Software bara ezigbo uru nke na-adịghị achọ nkà pụrụ iche na oge na-ewe. Na n'isiokwu anyị ọzọ, ị ga-ahụ ntụziaka zuru ezu maka ịrụ ọrụ na ngwa a.
Na mgbakwunye na Nduzi DriverPack, enwere ọtụtụ ihe omume ndị ọzọ nwere ihe yiri ya - nyochaa ihe ejiri ejikọta, ịchọta ngwanrọ kachasị na sava ndị ọrụ.
Ihe dị mkpa: mgbe ị na-arụ ọrụ ndị ahụ dị n'elu, jide n'aka na ihe nbipute ahụ jikọọ na kọmputa! Usoro ahụ kwesịrị ịchọpụta ngwaọrụ ọhụrụ!
Usoro nke 3: Ihe nchọpụta pụrụ iche
Onye nbiwe Ndenye bụ nọmba pụrụ iche e kenyere ngwaọrụ site n'aka onye nrụpụta. Enwere ọrụ pụrụ iche nke na-eme nhọrọ nke ngwanrọ software na ID nke ngwaọrụ. Ya mere ị nwere ike ibudata ma wụnye onye ọkwọ ụgbọelu. Maka onye nbipute na ajụjụ, ọ dị ka nke a:
Enwere ike ịchọta ntụziaka zuru ezu maka ịwụnye ọkwọ ụgbọala n'ụzọ dị otú a na isiokwu dị na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Ị nwere ike ịhọrọ ndị ọkwọ ụgbọala maka onye nbipute ahụ iji ọrụ usoro isi. Usoro a kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụhaala na nsụgharị ọ bụla gara aga ewetaghị nchịkọta chọrọ maọbụ na ị nweghị ọchịchọ iji oge nyocha, nbudata ma wụnye. Edere nkọwa banyere ya na isiokwu dị iche iche.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ịwụnye onye ọkwọ ụgbọala maka onye nbipute bụ ọrụ dị mfe. Anyị nwere olileanya na isiokwu a nyere aka dozie nsogbu nke ịchọta software nke Canon MF3010 gị.